Leader Fanilo : “Tetika hijanonana amin’ny fitondrana ny fanitsiana lalàmpanorenana” | NewsMada
Leader Fanilo : “Tetika hijanonana amin’ny fitondrana ny fanitsiana lalàmpanorenana”
Mitohy ny fanehoan-kevitra mitsipaka ny fikasan’ny mpitondra hanitsy lalàmpanorenana. Tetika hijanonana amin’ny fitondrana io, raha ny fijerin’ny Leader Fanilo.
“Tetika hijanonana eo amin’ny amin’ny fitondrana ivelan’ny fe-potoana voafaritry ny lalàmpanorenana ny fisakana ny hanitsy ny lalàmpanorenana, heritaona mialoha fifidianana.” , hoy ny Leader Fanilo, tarihin’ny filoha nasionaliny, Rabesa Zafera Antoine, omaly. Fanalavana ny fe-potoam-piasana izany, satria manakorontana ny fomba amam-pitsipika ara-potoana amin’ny fikarakarana ny fifidianana miaraka amin’ny enti-manana ara-bola efa napetraka mialoha. Mitsipaka marindrano ny fanitsiana ny lalàmpanorenana izy ireo.
Mila vahana maika ny olana mahazo ny vahoaka
Raha hirosoana ny fanitsiana lalàmpanorenana, tokony homen-danja ny amin’ny fitsinjaram-pahefana sy ny antoka amin’ny fanjakana tan-dalàna, araka ny fanambarana.
Mba hamahana ny olana izany, tsy angatahina andro, ireo olana lehibe mahazo ny vahoaka malagasy sy ny lafiny toekarem-pirenena amin’izao toy ny tsy fandriampahalemana, fahantrana, ny tsy fisian’asa, ny tsy rariny, ny kolikoly, ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanabeazam-pirenena.
Tolo-kevitra ny antoko ny fijerena ny tsy mety sy banga amin’ny lalàmpanorenana, ny tsy firindrany sy ny tsy mazava. Nambarany fa tamin’ny fotoan-tsarotra nolalovan’ny firenena no nandrafetana io lalàmpanorenana io. Tokony ho an’ny mpitondra manaraka eo no manao ny fanitsiana na fanovana.
Hatao amin’ny fiandohan’ny fe-potoam-piasany izany, fa tsy eny antenantenam-potoana na amin’ny fiafaran’ny fe-potoam-piasana.